Accueil > Gazetin'ny nosy > Governemanta Ntsay : Tsy nisy re ho nanao kolikoly na nodinkodim-bolam-panjakana
Governemanta Ntsay : Tsy nisy re ho nanao kolikoly na nodinkodim-bolam-panjakana
Eo ampiandrasana izay ho vokatra ny tombana ataon’ny filohampirenena amin’ireo mpikambana mandrafitra ny governemanta Ntsay Christian ny rehetra. Dia lasa fisainana ny mpandinika sasany hoe “sambany mba tsy nisy re ho nanao kilikoly avo lenta (???) na nanodinkodim-bolam-panjakana na naampatra fahefana ka nanelanelana tamin’ny raharaha maloto tetsy sy teroa ireo minisitra isan-tokony”. Ady hevitra azo sokafana tokoa aloha izany, fa ny tsapa ho nisongadina dia ny tsy fahitana vokatra mivaingana loatra ka nitarika ny fanalefahana ny fahasahiranan’ny vahoaka.
Saika nifantoka betsaka tany amin’io tsy dia fahombiazana io ny mason’ny maro. Dia midika ve izany fa tsy nisy tokoa ny kolikoly? Milaza ve izany fa tsy nisy ny fanodinkodinam-bolam-panja
kana ? Dia tsy ho nanao fanelanelanana tetsy sy teroa tamin’ny tranga mety ho nahavoasaringotra ny havany na ny namany tamin’ny raharahan-keloka ve izy ireo na iray aza ? Dia tsy ho nisy nanararaotra naka ny antsoina hoe “ambony ampanga” na “pourcentage” na “commission” tamin’ny raharaha nifanarahana tetsy sy teroa ve izy ireo ?
Tokony tsy hadinoina koa aloha fa maro tamin’ireo mpitondra nifandimby teto ange no hita fototra ny nataony reherfa tsy teo amin’ny toerany intsony izy e !
Ianao ve nandre tamin’ny fotoana naha-minisitra ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra an’i Maharante Jean de Dieu (jona 2018-janoary 2019) hoe nisy vola an’arivony tapitrisa (miliara) voahodina tao amin’ny ministera nosahaniny raha tsy efa nitsoaka nandositra any ampitan’ny ranomasina izy ? Firy volana aty aorian’ny fahitana fototra ny raharaha vao niloa-bava izy fa “nisy nangalatra ny soniany”?
Ianao ve dia nandre fony minisitra ny Mponina i Onitiana Realy fa nisy vola voahodina tao raha tsy efa tany ivelan’ny fahefam-panjakana izy ? Toraka izany koa ny tamin’ilay minisitra ny Asa vaventy tao anatin’ny faramparan’ny tetezamita (2011-2013).
Na ny raharaha hafa toa ny Raharaha Villa Elisabeth aza dia nahazendana fa tsy re raha tsy efa firy taona aty aorian’ny naha-Praiminisitra lefitra an’i Reboza Julien ka nahavoatonona ny anarany. Dia variana ny saina nihaino ny fiarovan-tenany hoe “marobe ny antontan-taratasy nataony sonia ka tsy tsikariny tamin’izany io antontan-taratasy fifampivarotana ny Villa Elisabeth io hoe isan’ny voasonia”. Fiheverana ny vahoaka ho bado ange izany.
Mahalana no misy mpitondra ambony mbola amperin’asa dia re na fantatra fa nanao raharaha maloto. Izy ireny indray aza moa aty aoriana no tsy voakitikitika. Isan’izany ny raharahan’ny kaominina Ambohimahamasina any Ambalavao Fianarantsoa, izay nahavoaheloka an-dramatoa Razaimamonjy Claudine, nefa ny minisitra ny Atitany tamin’ny fotoana andro sady Praiminisitra, dia i Solonandrasana Olivier Mahafaly no tena ati-dohan’ilay raharaha misanda ho 2.000 tapitrisa iamg na 400 tapitrisa ariary latsaka kely. Toraka izany koa ny fanamparam-pahefana nampitampim-bava ny maro nataon’ny anabavy sy rahalahin-dRajaonarimampianina fony filoha izy. Nampikolay vahoaka ny nafitsok’i Voahangy Rajaonarimampianina tamin’ny raharaha maloto maro nitranga teto, hatramin’ny fakana ankeriny, fakana vola amin’olona, fanerena ny mpitondra ambony hampamoaka vola hanomezana fahafaham-po azy amin’ny asa (???) sahaniny… Mahalana koa no nisy filohampirenena nalaza nandritra ny fitantanany ny fanamparam-pahefana nataony, toy ny nafitsok’i Marc Ravalomanana tamin’ny fotoanandro. Manomboka amin’ny filibana sy filalaovana vehivavy ka hatramin’ny fanagadrana ny tsy mitovy hevitra aminy, mandalo amin’ny fanamparam-pahefana amin’ny volam-panjakana, ny fanaovana an-keriny ny fananan’olona, dia ireo mpandraharaha ara-toekarena hitany fa miroborobo, sy ny maro tsy ho voatanisa e!
Dia manara-maso ny rehetra satria matetika dia tonga amin’ilay fitenenana hoe “sady tsy mahay no tsy menatra no tsy matahotra” ny sasany izay mitana fahefam-panjakana. Sady tsy ahitam-pahombiazana no mangalatra sy manararao-pahefana no manosihosy ny hasina sy ny zon’ny sasany.
Inty sy Nday : “Panier garni” faharoa ity !
Ihorombe : Tsy ekena ho Governora i Tinah Rabendrainy
Fisorohana ny disadisa : Novoriana maika ireo sefom-pokontany eto andrenivohitra
Fomba fizarana ny sôsialim-bahoaka : Aoka mba hajaina ireo fepetra mbola manan-kery
Mpanohitra : Manao izay tsy hitiavan’ny vahoaka azy
Olona sahirana eny Faravohitra : Tsy nomen’ny TIM na vary iray kapoaka aza